Mpiasa Silamo ao Boeny Notolorana ny « Iftar »
Faran’ny herinandro nampivarahontsana 6 maty, 418 tratry ny coronavirus
Nampihorokon-koditra ny zava-nisy mikasika ny valanaretina coronavirus ny faran’ ny herinandro teo.
Centre Médical Covid 19 - Village Voara 300 isan’andro no tonga manatona eny
Olona miisa 300 isan’andro tamin’iny herinandro iny no tonga manatona teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka misy ny Centre Médical COVID 19 na ny CMC.
Ady amin’ny COVID 19 Ireo mpandeha an-tongotra no tena mafy loha
Ireo mpandeha an-tongotra no hitan’ny mpitandro ny filaminana fa mafy loha manoloana ny ady amin’ny COVID 19 tanterahina eto amintsika.
Fifehezana ny Covid 19 Mihiboka tanteraka Analamanga
Faritra mikatona sy mihiboka tanteraka Analamanga. Io no tapaky ny filan-kevitry ny minisitra ny sabotsy 4 jolay teo, notarihan'ny Filoha Andry Rajoelina tamin` ny alalan` ny “visioconference”,
Lalatiana Andriatongarivo “Mandaitra ny CVO fa misy antony hafa matoa tsy avotra”
Mandaitra ny fiarovana amin’ny CVO. Ny nanomezan’ny olona tsiny ny fanjakana dia ny hoe maninona no nomena maimaimpoana ny any ivelany.
Fitsaboana sy fandraisana an-tanana Hanana antontam-baovao matotra kokoa isika
Misy ny paikady handraisana an-tànana ireo marary tsy misy soritr’aretina. Hapetraka ny “plateforme digitale”
Morondava Mikatona avokoa ny fiangonana, mitsahatra ny zotra rejionaly
Nandray fepetra maromaro ny ivon-toeram-pibaikoana na CCO Covid-19 Menabe manoloana ny tsy fahasalamana nahazo ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy sady Filohan'ny FFKM izay nivahiny sy nitarika fivoriana tao Morondava ny herinandro lasa teo,
Toy ny fanao isan-taona amin’ny fotoanan’ny Ramadany dia nanolotra “Iftar” ho an’ny faritra Boeny, ho an’ireo mpiasa silamo ao an-toerana na ny Directaïd Madagascar, ny lehiben’ny faritra ao an-toerana.
Vary, menaka, ronono, siramamy ary “pattes” no natolotry ny lehiben’ny faritra Boeny mpisolo-toerana, Bazezy Clavelah, ho an’ireo mpiasa Silamo ao aminy tao amin’ny Lapan’ny faritra Mahajanga, ny faran’ny herinandro teo. Tsy inona moa ny Iftar fa fanomezana masina eo amin’ny finoana Silamo. Fotoana handinihan-tena sy hanamafisam-pinoana ary hanaovana asa soa rahateo ny Ramadany ho an’ireo mpino Silamo.